नेकपा स्थायी कमिटी बैठक - महिना दिनमा बस्ने वाचा वर्ष दिनपछि पूरा
गत साल मङ्सिर २९ गते बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक यो साल पनि मङ्सिर २९ मै बस्ने भएको छ ।
सोमवार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले स्थायी कमिटीको बैठक मङ्सिर २९ गते बोलाइएको जानकारी दिए ।
गतसाल बसेको स्थायी कमिटी बैठक १४ दिनसम्म बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सरकार र पार्टी संचालन प्रक्रियाको विरोध भएको थियो । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एकीकरण भएपछिको पहिलो बैठकलाई सरकारको आलोचना गर्ने 'फोरम' बनाएका थिए ।
बैठकले पार्टी एकीकरणको संगठनात्मक खाका तयार गर्न भन्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा 'बादल'को संयोजकत्वमा एक समिती गठन भएको थियो । पुसभित्र एकताको खाका तयार गरिसक्ने र माघमा अर्को स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने बताइएको थियो ।
स्थायी कमिटी बैठकले बनाएको उक्त समिति काम गर्न नपाई सचिवालयमार्फत विघटन भयो ।
यो एक वर्षको बीचमा पार्टी एकताका आधारभूत प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएका छन् । बाँकी रहेका केही निकायहरू छिटै सम्पन्न हुने नेताहरूले बताउने गरेका छन् ।
तर त्यतिबेला माघमा बोलाउने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक ठ्याक्कै एक वर्षमा बस्ने भएको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले एक महिनामा बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक एक वर्षमा बस्नु खुसीको कुरा नभएको बताए ।
'यो नयाँ कुरा होइन, हामीलाई बैठक बसौं र निर्णय अनुसार पार्टी संचालन गरौँ भनिरहेका थियौं,' भुसालले भने, 'अब बस्ने भनिएको छ । विधिसम्मत काम गर्न निरन्तरको बैठक आवश्यक छ । त्यही अनुसार सचिवालयले बैठक आह्वान गरेको छ । यसलाई ठिकै भयो भन्नुपर्ला ।'
गत मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीका काम हेर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको काम हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरेको थियो । त्यसयता प्रचण्डले दुईपटक सचिवालय बैठक बोलाइसकेका छन् ।
यसपालिको स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रचण्डकै अध्यक्षतामा हुने प्रचण्डनिकट स्रोतले दाबी गरेको छ ।
'अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी हेर्ने गरी कार्यविभाजन भएपछि उहाँको सक्रियता बढ्नु स्वाभाविक हो,' प्रचण्डनिकट एक नेताले भने, 'स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता पनि उहाँले नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको अध्यक्षमा पनि उहाँ निर्विकल्प हो ।'
एक वर्ष अघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै पार्टीको विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गरेसँगै सचिवालयले त्यतिबेलै आएका सुझावका आधारमा विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् सोमवार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकका निर्णयहरू :
– यसभन्दा अगाडि बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्देशनलाई मान्दै पार्टी विधानमा केही संशोधन गर्ने सन्दर्भमा स्थायी कमिटीको निर्देशन र यसअघि सचिवालय बैठकमा नै भएका निर्णयलाई आधार मानेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने ।
– हालै सम्पन्न उपनिर्वाचन समीक्षाका क्रममा २२ गतेभित्र रिपोर्ट पठाउन भनिएकोमा केही कमिटीबाट रिपोर्ट अझै पनि प्राप्त नभएकाले ५ दिनभित्र सबै कमिटीले अनिवार्यरूपमा रिपोर्ट पठाउनुपर्ने र सचिवालयको अर्को बैठकमा महासचिवले ती रिपोर्टहरू पेश गर्ने ।
– संगठन विभागले विभागको तहबाट एक कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेको छ । यसबारे पार्टी अध्यक्षलाई सुझावहरू पेश गर्ने र त्यसबारे संगठन विभागसँग समेत छलफल गरी अर्को बैठकमा अध्यक्षले निर्णयार्थ पेश गर्ने ।
– विभिन्न जिल्लामा संगठनात्मक क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे आवश्यक छानबिन र समाधान गर्न संगठन विभागलाई जिम्मेवारी दिने ।
– केन्द्रीय विभागहरूको पूर्णताका निम्ति सम्बन्धित विभागका प्रमुख र उपप्रमुखले ७ दिनभित्र महासचिवमार्फत प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र आगामी बैठकले विभागहरूलाई पूर्णता दिने ।
– पार्टीका कर्णाली प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्माले दिएको राजीनामा अस्वीकार गर्ने र यथावत काममा फर्किन निर्देशन दिने ।
– पार्टी सचिवालयको आगामी बैठक यही मंसिर २७ गते अपराह्न बस्ने ।
– पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक यही मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेबाट शुरू हुनेगरी तय गरिएको छ । उक्त बैठक सामान्यतया २ दिनमा सम्पन्न गर्ने ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए ६ सय ३८ कोरोना संक्रमित
लगानी बोर्डका सीईओ भट्टलाई काम गर्न उच्च अदालत पाटन...
पाेखरामा एकै परिवारका ९ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछ...
जो बाइडनले उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएकी कमला ह्यारिस को हुन् ? हिन्दू धर्मसँग उनकोसम्बन्ध कस्तो ?
कोरोनाले रोक्यो १२ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादन, पर धकेलिए अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा युवा भएनन् लाभान्वित
ग्यास्ट्रिकले सतायो ? खाली पेटमा लसुन खानुस !
खलंगा–खार–देथला सडकखण्ड दुईतर्फी अवरुद्ध
नेपालभित्रै खोला तारेको १ हजार रुपैयाँ !